कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमा नहुने पक्का , नयाँ मिति कहिले ? - DURBAR TIMES
HomePoliticsकांग्रेस महाधिवेशन फागुनमा नहुने पक्का , नयाँ मिति कहिले ?
कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमा नहुने पक्का , नयाँ मिति कहिले ?
कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमा नहुने पक्का भएकाे छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको आइतबारको बैठकले क्रियाशील सदस्य नवीकरण र नयाँ वितरणको अन्तिम मितिका सम्बन्धमा निर्णय लियो । निर्णय अनुसार जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम विवरण र आवश्यक कागजात केन्द्रमा बुझाउने मिति २०७७ साल माघ मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।
याे प्रक्रिया हेर्दा कांग्रेस महाधिवेशन फागुन ७ मा उद्घाटन हुने सबै सम्भावना टरिसकेका छन् । तर पनि कांग्रेसले महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको छैन । नयाँ मिति नतोक्नुका कारणबारे नेताहरुको फरक–फरक बुझाई छन् ।
Previous articleपल र रेश्माको ‘क्या मज्जा आको’ गीत सार्वजनिक
Next articleबादलको बिरोधमा उडे लाल गद्दार लेखेका बेलुनहरु(तस्वीरहरुसहित)